Global Myanmar Spring Revolution Rally in Tokyo (13th June)
English • Jun 13, 2021
ミャンマー政府の統一政府 (NUG) を支援するため、TTAJ (メンバーやボランティアを含む約150名) は、
On the 13th of June, TTAJ (around 150 people including members and volunteers) participated in Global Myanmar Spring Revolution (Tokyo) as one of the Major Marching groups inaGlobal Myanmar Spring Revolution Rally in Tokyo.
Demands from this Rally
To recognise People's Government (NUG) as legitimate Government.
To priortise Myanmar Cause in G7 Summit
Myanmar Cause is Global Cause, to win this Spring Revolution
Senator from Upper Senate, Mr.Itabashi, who has been working hard for Myanmar Cause and Japanese Reporter Mr Kitazumi, who was detained by Myanmar Military Regime attended today Rally and hadacouragous speech about how they are standing with Myanmar Citizens.
The first time GMSR was led and organised by Myanmar People in Taiwan and this second time was led and organised by Myanmar People in Japan.
⭐️Preparations by TTAJ⭐️
Preparation of3fingers stickers and Red Bandana
We would like to express our deepest gratitude to our beloved volunteers who came and joined under this vicious heat. 🙏🥰
It shook to our cores when we experienced non-stop shouting and marching to express patriotism.
We will be waiting for you to join us in the coming events.🤗
Myanmar Cause is Global Cause.🌎
All will rise if individual has been wronged.✊
This Spring Revolution isaSURE WIN for us.✊
"ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးချီတက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ခြင်း"
[English and Japanese version below]
ယနေ့ ဇွန်လ (၁၃) ရက်နေ့တိုကျိုမြို့တွင်ကျင်းပသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နွေဦးတော်လှန်ရေး လမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွင်
လူဦးရေ(၁၅၀) ခန့်ပါဝင်သောအဖွဲ့လိုက်စစ်ကြောင်းတစ်ခုအဖြစ် TTAJ အဖွဲ့မှ ပါဝင်အားဖြည့်ခဲ့ပါတယ် ။
ယခုတကြိမ် လမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲ၏ တောင်းဆိုချက်များအဖြစ်
၁။ ပြည်သူ့အစိုးရ NUG ကို နိုင်ငံတကာမှ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုရန် ၊
၂။ G7 Summit တွင် မြန်မာ့အရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးပါရန်နှင့်
၃။ မြန်မာ့အရေးသည် ကမ္ဘာ့အရေးဖြစ်ကြောင်း အရေးတော်ပုံအောင်နိုင်ရေး အတွက်
မြန်မာ့အရေးအတွက် အင်တိုက်အားတိုက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးနေသော ဂျပန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Mr.Ishibashi နှင့် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှ မတရားဖမ်းဆိီးခြင်းခံခဲ့ရသော ဂျပန်သတင်းထောက် Mr.Kitazumi တို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်အတွက် အပြည့်အဝရပ်တည်အားပေးနေကြောင်း အမှာစကားများ ပြောကြားပေးသွားခဲ့ပါတယ် ။
✊🏻 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကို ပထမအကြိမ် ထိုင်ဝမ်ရောက်မြန်မာများက ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့ပြီး ယခု ဒုတိယအကြိမ်တွင် ဂျပန်ရောက်မြန်မာများက ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၂။ လက်သုံးချောင်းပုံစတစ်ကာနှင့်နဖူးစည်းအနီများ ပြင်ဆင်ထားရှိပေးခြင်း
ရာသီဥတုပူပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာတောင် အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်ပေးကြသော TTAJ's Volunteerများ အားလုံးကို ရင်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ရပါတယ် 🙏🥰
တစ်ချက်လေးမှ ရပ်နားမသွားသောကြွေးကြော်သံများ၊အားမာန်အပြည့်ဖြင့် ချီတက်ဟန်များကြောင့် ကြက်သီးထရလောက်အောင် မျိုးချစ်စိတ်ကိုသိခဲ့/ကြားခဲ့ရပါတယ်
မြန်မာ့အရေးသည် ကမ္ဘာ့အရေး 🌎
တစ်ယောက်ထိရင် အကုန်ထကြွ ✊
အရေးတော်ပုံ အောင်ကို အောင်ရမည် ✊